राष्ट्रिय माविमा भद्रगोल ! प्रध्यानाध्यापकको मनोमानी, तलव नपाएको भन्दै शिक्षक आन्दोलित – सुदूरखबर डटकम
राष्ट्रिय माविमा भद्रगोल ! प्रध्यानाध्यापकको मनोमानी, तलव नपाएको भन्दै शिक्षक आन्दोलित
label जीवन बिष्ट query_builder August, 14 2019
धनगढी,साउन २९ । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१ सुखडमा रहेको राष्ट्रिय माविमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको मनोमानी बढ्दै गएको र तलब नपाएको भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिए पछि मंगलवारबाट बिद्यालयको पठन पाठन अवरुद्ध वनको हो ।
प्रधानाध्यापक चौधरीले आफूले नियमित रूपमा तलब बुझेपनी अन्य शिक्षकहरूलाई ८ महिना बित्दा पनि तलब नपाएको शिक्षक दीपकराज गौतमले बताए ।
प्रधानाध्यापक चौधरीले विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता गरेका कारण बर्षाै देखी सार्वजनिक सुनुवाइ समेत नगरेको शिक्षकहरूको आरोप छ । प्रधानाध्यापक चौधरीले विद्यालयका महत्त्वपूर्ण सूचना समेत लुकाउने गरेका कारण बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको शिक्षक राजु बस्नेतले बताए ।
आन्दोलित शिक्षकहरूले प्रधानाध्यापक चौधरीको राजीनामा माग समेत गरेमा छन् । प्रधानाध्यापक चौधरीले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । माग पुरा नभए सम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी शिक्षकहरूको छ ।
बिद्यालय प्रशासन समक्ष ६ बुदेँ माग
आन्दोलित शिक्षकहरुले प्रध्यानाध्यापक राम छबिला चौधरी समक्ष ६ बुदेँ माग पत्र पेश गरेका छन । संचयकोष नियमिति गर्नु पर्ने,आंशिक शिक्षकहरुले खाई पाई आएको ३ महिनाको तलब दाखिला गर्नु पर्ने,विहानी वा दिवा शत्र कुन संचालन गर्ने निश्चीत गर्नुपर्ने,नियुक्ती पत्र दिनु पर्ने,संगित शिक्षक लालमणी जोशी सरको सम्मान जनक व्यवस्था गर्नु पर्ने मागहरु शिक्षकहरुले राखेका छन् ।
साथै उनीहरुले भाद्र १ गते सम्म माग पुरा नभए कडा सर्घषमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षकहरुका माग प्रती प्रशासन सकरात्मक देखिए पछी बुधबार बाट पठन पाठन सुरु भएको छ ।
पत्रकार विष्ट सुदूरखबरका कैलाली (धनगढी) संवाददाता हुन् । उनी २०७० देखि पत्रकारिता क्षेत्रमा सक्रिय छन् ।
कैलालीमा डेंगुको संक्रमण ! डेंगु कस्तो खाले रोग हो ? समस्या देखि सामधानका उपाए वारे जानकारी
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा: बर्खे अधिवेशन सम्पन्न,८ कानुन निर्माण
चार ग्राम लागुऔषध सहित धनगढीमा दुई जना पक्राउ
नगरपालिका प्रमुखको टोली द्वारा बिधालय अनुगमन
बाजुराबाट बेपत्ता रहेका पत्रकार तेजु खड्काको भेट्टाईएको सामान आफन्तलाई बुझाईयो
झुलाघाट नाका चार दिनका लागि बन्द
यस्तो बन्दै छ धनगढी-अत्तरिया जोड्ने ६ लेनको सडक (फोटो फिचर)
बैतडीमा बिडीसिए कप क्रिकेटको १९ औं संस्करण सुरु,
सांसद जोशीद्धारा हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहात हस्तान्तरण
सिगासका ऐतिहासिक महत्व बोकेको पर्यटकिय स्थलहरु अझै ओझेलमा, सम्बन्धित निकायको बेवास्ता
धनगढीमा वल्ड सि ओपिडी डे मनाइयो